Izipho zikaMoya oNgcwele :? Isambulo, Amandla, Ugqozi 
Izipho zoMoya oNgcwele
Ukwazi ukuthi ziyini Izipho zoMoya oNgcwele incwadi eyabhalwa ngumphostoli uPawulu eya kwabaseKorinte kumele ifunwe emibhalweni engcwele. Lapho, ikakhulukazi esahlukweni 12, kusukela evesini 8 kuya kwele-10 sipho ngasinye sichaziwe.
Izipho izipho esizitholayo, esimweni sezipho zoMoya oNgcwele, sikhuluma ngezipho ezikhethekile esinikezwe zona ngenhloso yokubusisa iBandla likaKristu ngokubonakaliswa kwezinye zazo.
Izipho azitholwa ngokukholwa kepha zinikezwa njengoba uBaba ebona isidingo nabantu bakhe. Lezi zipho zihlukaniswa zaba ngamaqembu amathathu ngokwezimpawu nobuntu bazo.
1 Ukuhlukaniswa kwezipho zikaMoya oNgcwele
1.1 Izipho zoMoya oNgcwele: Izipho zikaSambulo
1.2 Izipho zoMoya oNgcwele: Izipho Zamandla
1.3 Izipho zoMoya oNgcwele: Izipho Zokuphefumula
Ukuhlukaniswa kwezipho zikaMoya oNgcwele
Izipho zoMoya oNgcwele: Izipho zikaSambulo
Lezi zipho ukuletha olwazini lomuntu izehlakalo ezithile ezisafihliwe njengezinhloso, amacebo noma intando kaNkulunkulu. Lezi zipho yilezi:
Kuyisipho esivumela ukuthola izambulo ezikhethekile. Isibonelo esicacile salesi sipho esibonisiwe esisibona kuJesu uqobo lapho etshela uPhetro ukuthi ngaphambi kweqhude lokucula uzosiphika kathathu. (UMathewu 26: 34)
Leli gama lesambulo lingeza ngamaphupho, imibono, isiprofetho noma iphimbo elifanayo le UNkulunkulu.
Lesi sipho esithile, lapho sivezwa, asivezi izehlakalo zangesikhathi esizayo kepha kunalokho okwedlule noma kwesamanje okukukulokho okusebenzayo.
En Isahluko 4 seVangeli NgokukaSanta John, kuyabonakala le ndaba yowesifazane waseSamariya, lapho uJesu emtshela khona ukuthi unamadoda amahlanu kanti futhi manje umyeni wakhe akayona indoda yakhe, lokhu kuyisibonelo esicacile sokubonakaliswa kwalesi sipho.
Isipho sokuqonda komoya
Kuyisipho esingokomoya esibonakalayo sokwakhiwa kwesonto likaKristu. Ngalesi sipho uyakwazi ukubona ukuthi yimuphi umoya osebenza kumuntu othile ngesikhathi esithile.
Umphostoli uPawulu usikhombisa ukuboniswa okucacile kwalesi sipho lapho ekwazi ukubona umoya owasebenza ku-Elimas, lelo ndima litholakala encwadini yezEnzo zabaPhostoli esahlukweni 13 ivesi 9 no-10.
Izipho zoMoya oNgcwele: Izipho Zamandla
Uhlobo lwesipho esingaphezu kwemvelo esibonakalisa ukukhulisa ukholo lwamakholwa nokwenza labo abangakholelwa emandleni kaNkulunkulu bakholelwe.
Isipho Sokwenza Izimangaliso
Ngenye yezipho ezimangalisa kakhulu ngoba uma ibonakaliswa yenziwa ngezimangaliso zaphezulu, ngezinto ezithile, njengokukhuluma komuntu, akunakwenzeka.
Ezwini likaNkulunkulu sibona isimangaliso sokuqala sikaJesu okwakungukuguqula amanzi abe yi-wayini, into okungekho muntu ongayenza, wakwenza futhi wamangaza bonke ababekhona (Johane 2: 9) Lesi ngesinye sezimangaliso ezaziwa kakhulu zikaJesu.
Kukholwa okunikezwe nguMoya oNgcwele okungeyona inkolelo yemvelo abantu abanayo kodwa iqhubeka kakhulu. Kukholwa okuholela ekutheni umuntu akholelwe kokungeke kwenzeke, kokweqiniso, kulokho okuvela ngqo kuNkulunkulu.
Ezwini likaNkulunkulu usitshela ngendoda ethi yayigcwele amandla nomusa, okungukuthi, isipho sokukholwa sabonakaliswa kuye, le ndoda inguStefanu futhi udaba lwayo luse encwadini yezEnzo Abapostoli esahlukweni 6 kusukela evesini 8 kuye phambili.
Lesi sipho sikhonjiswa kakhulu emzimbeni womuntu futhi kuphela uma kunenhloso yaphezulu kulolo lwazi oluthile. Kulesi sipho, ubuningi busetshenziswa ngoba kunezipho eziningana zokuphulukisa hhayi eyodwa njengakwamanye. Ngamanye amagama, umuntu angaba nesibonakaliso sesipho esithile sokuphulukisa, ngakho-ke azivezi ngokwelapha zonke izifo kepha ezinye.
Amavangeli amane kanye neNcwadi yeZenzo zabaPhostoli zigcwele izindinyana ezikhuluma ngezindaba zezimangaliso zokuphiliswa okumangalisayo.
Izipho zoMoya oNgcwele: Izipho Zokuphefumula
Lezi zipho zikhonjiswa ngokwakhiwa kweBandla. Yizipho ezidonsela ukunaka okuningi futhi ziyamangala ngemvelaphi yazo namandla ezinikela lapho ziveza.
Ngenye yezipho ezishushiswa kakhulu ngoba ngumlomo ofanayo kaNkulunkulu okhuluma ngokholwayo.
Akufanele ididaniswe nenkonzo yokuprofetha njengoba ihluke ngokuphelele. Lesi sipho singasetshenziswa ukukhuthaza, ukwakha, ukududuza, ukufundisa, nokuqinisekisa. Kuyisipho okufanele sisetshenziswe ngokuzibophezela nokuhleleka ngoba sikhuluma egameni likaNkulunkulu.
Ukukhuluma ngezilimi kuwukubonakaliswa koMoya oNgcwele, kepha lapho lokhu kwenzeka, kukhulunywa uhlobo olulodwa kuphela lolimi.
Lapho kukhulunywa ubulili obungaphezu koyedwa, kungenxa yokuthi isipho siyabonakala. Izinhlobo zezilimi ziyabonakala ngenhloso yaphezulu, njengoba sibona encwadini yeZenzo zabaPhostoli esahlukweni 2 amavesi kusuka ku-12 kuye ku-XNUMX.
Lapho lesi sipho sikhonjiswa sisebenzise umzimba wokholwayo kepha konke kubuswa ingqondo kaKristu kuphela.
Lesi sipho, njengoba singesokugcina, siqala ukubonakala lapho ukwabiwa komusa kuqala, okuyisikhathi esiphila kuso namanje. Lesi sipho sikhonjiswa ukunikeza incazelo ezilimini ezahlukahlukene ezingakhulunywa lapho uMoya oNgcwele uthatha izintambo zeBandla.
Umphostoli uPhawuli weluleka abaseKhorinte ukuthi bakhulume ngezilimi ngokuzwakalayo lapho kutolikwa itolika endaweni, kodwa-ke kufanele bakwenze lokho buthule, lokhu ngenhloso yokugcina ukuthula emabandleni futhi sikwazi ukuqonda umyalezo wokuthi uNkulunkulu Ufuna ukunika ibandla.
Izipho zoMoya oNgcwele zinikezwa izinhloso zaphezulu futhi kumele ziboniswe ukuze zikwazi ukufeza izinhloso zazo ngaphandle kokuphazamiseka.
Ikholwa lingasivumela isipho ukuba sivele ngesikhathi esicabanga ngaso, ngoba sigcina inkululeko yakhe yokuzikhethela isivumele ukuba sigeleze noma cha.
Funda futhi le ndatshana ku indodana yolahleko y Izikhali zikaNkulunkulu.
Yiziphi izimpawu zikaMoya oNgcwele?
Inkolo YamaBuddha - Yazi Le Nkolo Ngemininingwane